Fanaraha-maso Pasta Soler
Ny famokarana Fumax SMT dia nametraka milina SPI mandeha ho azy hijerena ny kalitaon'ny fanontana vita amin'ny solder, mba hiantohana ny kalitaon'ny soldering tsara indrindra.
SPI, fantatra amin'ny anarana hoe solder paste inspect, fitaovana fitsapana SMT izay mampiasa ny fitsipiky ny optika mba hikajiana ny haavon'ny pacte vita amin'ny solder vita pirinty amin'ny PCB amin'ny triangulation. Izy io dia ny fizahana kalitaon'ny fanontana solder sy ny fanamarinana ary ny fibaikoana ny fizotran'ny fanontana.
1. Ny asan'ny SPI:
Jereo ny lesoka amin'ny kalitaon'ny fanontana ara-potoana.
SPI dia afaka miteny amin'ny mpampiasa an-tsaina hoe iza amin'ireo sary pirinty vita amin'ny solder no tsara ary iza no tsy tsara, ary manome isa ny karazana kilema misy azy.
Ny SPI dia ny mamantatra andiana paste solder hahitana ny fironana kalitao, ary hizaha ireo anton-javatra mety hahatonga an'io fironana io alohan'ny hihoaran'ny kalitao, ohatra, ny masontsivana fanaraha-mason'ny fanontam-pirinty, ny toetoetran'olombelona, ​​ny anton-javatra fanovana solika, sns. Avy eo isika dia afaka nanamboatra fotoana mba hifehezana ny fitohizan'ny fironana.
2. Inona no ho tsikaritra:
Haavony, habe, faritra, toerana tsy mety, fiparitahana, banga, fahatapahana, fiviliana ambony (tendrony)
3. Ny mahasamihafa ny SPI sy AOI:
(1) Aorian'ny fanontana pirinty vita amin'ny solder ary alohan'ny milina SMT, ny SPI dia ampiasaina hanatrarana ny fanaraha-maso kalitaon'ny fanontana solder sy ny fanamarinana ary ny fibaikoana ireo masontsivana momba ny fanontana, amin'ny alàlan'ny masinina fanaraha-maso fametaka (miaraka amin'ny fitaovana laser izay afaka mamantatra ny hatevin'ny ny paty solder).
(2) Taorian'ny masinina SMT, AOI dia fanaraha-maso ny fametrahana ny singa (alohan'ny fametahana refow) sy ny fanaraha-maso ireo vatan-tsolika (aorian'ny fametahana tariby).